Darpan Nepal – पोखराको रामबजारमा घाँटी रेटेर हत्या गर्ने को हुन् ? रहस्यमय बन्दै हत्याकाण्ड (भिडियो)
पोखराको रामबजारमा घाँटी रेटेर हत्या गर्ने को हुन् ? रहस्यमय बन्दै हत्याकाण्ड (भिडियो)
काठमाडौँ । गत जेष्ठ २९ गतेको पोखरा रामबजारको हत्याकाण्ड रहस्यमय बन्दै गइरहेको देखिएको छ। पोखरा १५ रामबजार निवासी रामजी घलेको घरमा भएको हत्याकाण्डको अझै छिनोफानो हुन सकेको छैन। सो दिन रामजी घलेका ११ बर्षीय छोरा ज्ञापन घलेको घाटीमा चक्कुले रेटेर हत्या भएको थियो।
छोरा ज्ञापनसंगै आमा सुमित्रा ठकुरी घले र स्यंम रामजी घलेको पनि घाटी रेटीएको थियो। गर्भवती श्रीमती सुमित्राको पेटको बच्चाको समेत ज्यान गएको थियो।
घटनापछि रामजी घलेले नै आफ्नै छोरा र श्रीमतीको घाटी रेटेको भन्ने चर्चा चलेको चल्यो तर हाल हिरासतमा रहेका रामजी घलेले यस अघि नै घटना अरु कसैले घटाएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएका थिए। रामजी घलेका आफन्त र केही छिमेकीको कुरा एकथरी छ भने, श्रीमतीको कुरा अर्कै छ। दुवै पक्षका कुरा समेटिएको भिडियो पहिलो पटक सार्वजनिक भएको छ।
Previous Postसुनसरीमा बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा एक पक्राउ Next Postटंकका छोरा एआर बुढाथोकीको ‘मन बिनाको धन’ लाइ टक्कर दिने नयाँ गीत ‘रेली माइ'(भिडियो सहित),